Alchemy Post Sound သည်ဆုရအင်ဒီဒရဒီဒီဒီဒီ“ တောင်တက်ခြင်း” အတွက်လက်ဖြင့်ဖန်တီးထားသော Foley ကိုပေးသည် | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » အဂ္ဂိရတ် Post ကိုအသံဆုကို-အနိုင်ရအင်ဒီ Dramedy "ဒီတောင်တက်" အတွက်လက်-Craft Foley ဘဝမှကယျတငျ
အဂ္ဂိရတ် Post ကိုအသံဆုကို-အနိုင်ရအင်ဒီ Dramedy "ဒီတောင်တက်" အတွက်လက်-Craft Foley ဘဝမှကယျတငျ
ရှည်လျားပြီးမပြတ်မတောက်ကင်မရာရိုက်ချက်များ၎င်း၏မကြာခဏအသုံးပြုခြင်းကိုအတူလိုက်ပါရန်အထူးပြု Foley အသံသည်လိုအပ်သည်လူနှစ်ယောက်၏ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဒါရိုက်တာမိုက်ကယ်အန်ဂျလို Covino ရဲ့ဇာတ်လမ်း။
Westchester, နယူး York- အမြင့်တက်ခြင်း, ဒါရိုက်တာမိုက်ကယ်အန်ဂျလို Covino ရဲ့ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ပွဲဦးထွက်အင်္ဂါရပ်, Covino နှင့်စစ်မှန်သောဘဝမိတျဆှေ Kyle မာတင်တို့ကတီးခတ်လူနှစ်ယောက်, မိက္ခေလနှင့် Kyle, အကြားရှုပ်ထွေးချစ်ကြည်ရေးအပေါ်စင်တာ။ မိုက်ကယ် Kyle ရဲ့လက်ထပ်ထိမ်းမြား၏ချိုး-Up ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်နီးပါးကသူ၏နောက်ဆက်တွဲအချစ်ဇာတ်လမ်းဖျက်ဆီးအဖြစ်မထင်မှတ်နီးပါး farcical, ဟာသနှင့် taut, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒရာမာတစ်ဦးရောနှောမှတဆင့်ဇာတ်လမ်းနှစ်ပေါင်းများစွာ spanning ဖြစ်စဉ်များတစ်စီးရီးကျော်ထွက်ပါဝင်သည်။ အားဖြင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလွှတ်ပေးရန်စီစဉ်ထား Sony က ရုပ်ပုံများဂန္တဝင်, ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ရဲ့ Un အချို့သောလေးစားလမ်းကြောင်းအတွင်းနှလုံး Prize ကိုဆွတ်ခူးယခုနှစ်ရဲ့ကိန်းရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာယင်း၏ကမ္ဘာကြီး Premiere ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
ယင်း၏ Foley အသင်းများအတွက်အဂ္ဂိရတ် Post ကိုအသံ (အသံကအယ်ဒီတာ / Re-မှတ်တမ်းတင်ရောနှောရိုင်ယန် Billia ကြီးကြပ်အောက်မှာအလုပ်လုပ်) မှ, အဆိုပါတောင်တက် ထူးခြားတဲ့ဖန်တီးမှုနှင့်နည်းပညာစိန်ခေါ်မှုများကြသည်။ မိက္ခေလနှင့် Kyle ကြိုတင် Kyle ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်မှပြင်သစ်တွင်ယူတဲ့ဆိုင်ကယ်စီးနင်းအပေါ်၎င်း၏ပထမဆုံးလုပ်ရပ်စင်တာများ။ လူနှစ်ယောက်ရှည်တောင်ကုန်းတက်သကဲ့သို့, မိုက်ကယ်သူ့မိတ်ဆွေရဲ့စေ့စပ်ထားသူမြားနှငျ့ ပတျသကျ. တစ်ဦးရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ဝန်ခံချက်စေသည်။ အဆိုပါရလဒ်များယောက်ျားနောက်ဆုံးမှာတစ်ဦးဖြတ်သန်းမော်တော်ဆိုင်ကယ်နှင့်အတူတစ်ဦးအကြမ်းဖက်ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်လာအတူဆိုးဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါတင်းမာမှုမှထည့်သွင်းခြင်း, မြေတပြင်လုံးမြင်ကွင်းတစ်ခုတစ်ခုတည်း, အဘက်ဘက်မှအထောက်အကူ Choreographer Steadicam ရိုက်ချက်အတွက်ဖမ်းဆီးရမိခြင်းဖြစ်သည်။
Foley အသံကလူနှစ်ယောက်ရဲ့ High-စျေးနှုန်းစက်ဘီး၏ idiosyncratic mechanics ရဲ့ပါဝင်သည်။ အဂ္ဂိရတ် Post ကိုအသံကျောင်းအုပ်ကြီးနှင့် Foley အနုပညာရှင် Leslie Bloom Covino သူတို့တိကျစွာယင်း၏ဂီယာ, shifters, တာယာနှင့်အခြား features တွေ၏ပြုပြင်ခြင်းကိုဖမ်းယူနိုင်အောင်ရုပ်ရှင်များတွင်အသုံးပြုအမှန်တကယ်စက်ဘီးတဦးနှင့်အတူသူ့အဖွဲ့ထောက်ပံ့ပေးကြောင်းမှတ်ချက်ပြုထားသည်။ "စက်ဘီးညာဘက်ရဖို့နာမည်ဆိုးခက်ခဲနေကြတယ်" ဟုသူကဆိုသည်။ အဆိုပါမြင်းစီးသူရဲ pedaling သောအခါဘီးလွတ်လပ်စွာ spinning ကြသောအခါ "သူတို့ကလုံးဝကွဲပြားခြားနားသောအသံ။ ထိုစက်ဘီးမြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မော်ဒယ်များကြ၏ သူတို့ rattle ပါဘူး။ သူတို့ဟာအတွက်စက်ဘီးနဲ့တူမှာအားလုံးအသံမပါဘူး Oz ၏ Wizard ကို သို့မဟုတ်အရာတစ်ခုခုကိုသင်အမ်စတာဒမ်အတွက်လမ်းမများပေါ်တွင်ငှားချင်ပါတယ်။ "
အခင်းဖြစ်ပွားရာမျှဖြတ်တောက်မှုရှိပြီးတစ်ခုတည်းကင်မရာရှုထောအမှတ်ကနေတင်ပြထားပါသည်သောကြောင့်, Foley သံကိုလည်းစဉ်ဆက်မပြတ်နှင့်စပ်ရာမရှိသောဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ မိက္ခေလနှင့် Kyle အန္တရာယ်သူတို့ကိုပယ်လျှော့ချသူတစ်ဦးကားမောင်းသူမှာမိမိတို့အမျက်ဒေါသဒေါသထွက်သောအခါရရှိ, အခင်းဖြစ်ပွားရာရဲ့အဆုံးမှာအထူးသဖြင့်လှည်ခဲ့ပါတယ်။ "ကျနော်တို့ကသူတို့ကားကိုလိုက်ရှာအတွက်အရှိန်မြှင့်အဖြစ်စက်ဘီး၏အသံကိုဖုံးလွှမ်းခဲ့ရတယ်" Bloom ကရှင်းပြသည်။ "နောက်ဆုံးတွင်ယောက်ျားတွေ၏တဦးတည်းကသူ့စက်ဘီးကို drop နှင့်ယာဉ်မောင်းတစ်ဦးရန်ပွဲသို့ရရှိသွားတဲ့။ သောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးနှင့်နောက်ခံဆန်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုနှင့်အတူဿုံထိုင်ခဲ့ကြောင်းကွဲပြားခြားနားသော Foley အသံလိုအပ်သည်။ "
Covino ကိုယျတိုငျ Foley အစည်းအဝေးများတက်ရောက်ခဲ့သည်နှင့်အလုပ်အပေါ်တုံ့ပြန်ချက်ပူဇော်ကြ၏။ "အခြားရုပ်ရှင်ကအဲဒီမှာဖြစ်မရှိမဖြစ်ပါပြီမပြုစေခြင်းငှါ, ဒါပေမဲ့စက်ဘီးသူတို့ကိုစီးနင်းဇာတ်ကောင်ကိုကိုယ်စားပြုဖို့လိုအပျသောကွောငျ့ဒီမှာဖြစ်ခဲ့သည်" ဟုအဆိုပါညွှန်ကြားရေးမှူးကရှင်းပြသည်။ "တစ်ဦးချင်းစီစက်ဘီးကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်စစ်မှန်ရှိသည်ဖို့ခဲ့ရပြီးငါအခွင့်အလမ်းမှစွန့်ခွာနိုင်တစ်ခုခုမဟုတ်ခဲ့ပေ။ ဒါဟာ Foley အစစ်အမှန်နှင့်အော်ဂဲနစ်ခံစားခဲ့ရကြောင်းအရေးပါခဲ့ပါတယ်, နှင့်ရုပ်ရှင်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ပရိသတ်ကိုကြုံနေရတာဖြစ်ပါတယ်မှ texture ကဆက်ပြောသည်။ "
ရုပ်ရှင်ရဲ့စာရေးဆရာနှင့်ဒါရိုက်တာအဖြစ်သူ၏အခန်းကဏ္ဍအပြင် Covino တစ်ဦးမြင်းစီးသူရဲ၏ရှုထောင့်ကနေ Foley ဆိုင်ကယ်အသံအပေါ်မှတ်ချက်ပေးရန်နိုင်ခဲ့သည်။ "မိုက်ကယ်အနေနဲ့အတွေ့အကြုံရှိစက်ဘီးစီးသူနှင့်မျှဝေတန်ဖိုးရှိသောစီးနင်း၏တစ်ခုလုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံသို့ထိုးထွင်းသိမြင်မှုနှင့်ဇာတ်လမ်းဖြစ်ပါတယ်" ဟု Foley အနုပညာရှင်ဟန္န Fang ကဖော်ပြသည်။ "ဟုသူကဇာတ်ကောင် '' လှုံ့ဆျောမှုနှင့်သရုပ်ဆောင်များကို၏ဖျော်ဖြေပွဲအကြောင်းပြောဆိုနိုင်ခဲ့သည်အဖြစ်သူ့ input ကိုပု Foley ၏စွမ်းဆောင်ရည်အသှငျအပွငျအဘို့အထူးသဖြင့်အထောက်အကူဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ "
တစ်ဦးကအလားတူတိုးချဲ့, တဦးတည်း-shot မြင်ကွင်းတစ်ခု, နောက်ပိုင်းတွင်ရုပ်ရှင်ကိုတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ သူတို့တစ်တွေအေးစက်နေတဲ့ရေအိုင်ကိုဖြတ်ပြီးလမ်းလျှောက် Kyle ရေထဲသို့ဇောက်ချပါဝင်လာရေခဲမှတစ်ဆင့်ချိုးအဖြစ်ဒါဟာလူနှစ်ယောက်အောက်ပါအတိုင်း။ Bloom Covino အသံဖြစ်ကြောင်းအခိုင်အမာကြောင်းမှတ်ချက်ပြု "ကျယ်သောအသံနှင့်မာနထောင်လွှား။ " "ကျနော်တို့ကကားတစ်စီး၏ကားရှေ့မှနျကနေကျိုးဘေးကင်းလုံခြုံမှုဖန် အသုံးပြု. ရေခဲထဲမှာခြေရာ၏ထူးခြားသောအကြပ်အတည်း created" Bloom ပြန်ပြောပြသည်။ "ကျနော်တို့ကတဆင့်ကိုချိုးဖောက် Kyle ၏ရုတ်တရက်အက်ကွဲများအတွက်ရေခဲနှင့်ဆီးနှင်းနဲ့ပေါင်းစပ်။ "
အဖြစ်ကိုတဖန်အဘယ်သူမျှမဖြတ်တောက်မှုရှိကြ၏ Kyle မျက်နှာပြင်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောကျရောက်အဖြစ်, Foley သံကိုမပြတ်မတောက်နေဆဲဖြစ်သည်။ "ကျနော်တို့ကလက်ရှိအတွက် flailing Kyle ၏အသံစေရန်ရေအပြည့်အဝကြီးမားတဲ့စည်ပိုင်းကိုသုံး," Foley ရောနှောနစ်ခ် Seaman ရှင်းပြသည်။ "ကျနော်တို့ကအဆင်းကိုဆောကညာဘက်ကိုရှုထောင့်ပေးရန် EQ နှင့်အတူကစားခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကင်မရာကို၏အနေအထားမှသော့ခတ်ခဲ့သည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကစိန်ခေါ်မှုဖြစ်ခဲ့သည်။ အများဆုံးဇာတ်ကားများတွင်ရှုထောင့်အစဉ်မပြတ်ပြောင်းလဲနေပါတယ်။ ကျနော်တို့နောက်ခံဇာတ်ကောင်နဲ့လူစည်ကားတဲ့အခန်းအတွက်ဖြစ်နိုင်ပေမယ့်သူတို့ရဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတက်မျက်နှာစာလျှင်ကျွန်ုပ်တို့မှရောမွှေပါ။ ဒါကြောင့်ရေသို့နှင့်ထွက်ဝင်အဖြစ်ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ကျနော်တို့ကင်မရာကိုလိုက်ကြ၏။ ဘယ်အချိန်မှာကင်မရာမျက်နှာပြင်များ, အသံလုံးဝပြောင်းလဲစေပါသည်။ "
တစ်ခုချင်းစီကိုတစ်ခုတည်းယူအဖြစ်ဆက်ရေးကြောင်းဖြစ်စဉ်များမှတဆင့်ဇာတ်လမ်းကိုပြောပြရန် Covino ရဲ့ရွေးချယ်မှုကရုတ်တရက်ရှားပါးခံစားမှုပေးသည်, ဒါပေမယ့်လည်းအယ်ဒီတာအဖွဲ့နှင့် Post-ထုတ်လုပ်မှုသံကိုအပေါ်အထူးတောင်းဆိုချက်များကိုသတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။ "သင်တစ်ဦး7မိနစ်ယူ၏နယ်နိမိတ်အတွင်းအလုပ်လုပ်နေကြသည့်အခါ, သငျသညျကွာတစ်စုံတစ်ဦးကမှားအရာကပြောပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သင်တို့ကိုချစ်သို့မဟုတ်မပါဘူးတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကနေဖြတ်လို့မရပါဘူး" ဟုသူကရှင်းပြသည်။ "သင်ကအတွင်းအကောင်းဆုံးပတ္တူနှင့်အလုပ်ဖြစ်သောပေါ်တွင်အခြေခံတတ်ကောက်။ ကျနော်တို့တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားယူကနေလိုင်းပေါင်းထည့်ရန်, တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးဖယ်ရှားပစ်ရန်သည်အသံတည်းဖြတ်ရေးအသုံးပြုသောနှင့် texture များအတွက် Foley အသံသည်အတွက်ရောနှောနေခြင်းဖြစ်သည်။ "
ဖန်အဂ္ဂိရတ် Post ကိုမပြုမီရှည်လျားသောရိုက်ချက်များများအတွက် Foley ဖန်တီးသည်ဟုမှတ်ချက်ပြုပေမယ့်အများဆုံးဖြစ်ရပ်အတွက်, သူတို့ကအရေးယူမြင်ကွင်းများပါဝင်ပတ်သက်။ တွင် အဆိုပါတောင်တက်သူတို့တစ်တွေ Lyrics ဇာတ်လမ်းပြောပြ device ကိုဖြစ်ကြသည်။ "ဒီရုပ်ရှင်များအတွက် Foley Creating တစ်ဦးကရေနံပန်းချီမှအရောင်ဖြည့်စွက်ကဲ့သို့ဖြစ်၏" ဟုသူမကပြောပါတယ်။ "ကျနော်တို့ကဤလှပသော, အရည်ရိုက်ချက်များဖန်တီးကူညီပေးဖို့အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဖြည့်စွက်, Impressionist ကချဉ်းကပ်။ "
ရုပ်ရှင်ရဲ့အများဆုံးဖမ်းဆီးမြင်ကွင်းများတစ်ခုမှာကျဆုံးခြင်းမှသည်ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလမှရာသီအပြောင်းအလဲအဖြစ်အိမ်ပြန်၏အပြင်ပန်းတစ်ဝှမ်းလောကထဲကလူတော်တော်များများကင်မရာရှိပါတယ်။ Covino ပရိသတ်တွေဟာအမြင်အာရုံမှော်များကယစ်စေခြင်းငှါစဉ်ကထင်ယောင်ထင်မှားရောင်းစားသောနောက်ခံအသံကသက်ရောက်မှုရဲ့မှတ်စုများ။ "ငါ့ကိုသည်, အသံအတွက်အရေးအပါဆုံးအနုပညာဖြစ်ပါတယ် ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေး"ဟုသူကပြောပါတယ်။ "သင်နည်းနည်းရှုပ်ထွေးဖြစ်ကြောင်းပုံရိပ်ယောင်များနှင့်အတူကွယ်ပျောက်ရနိုင်ပေမယ့်အသံကျိုးသည်လျှင်, ရုပ်ရှင်သတ်နိုင်ပါဘူး။ အသံသည်ကောင်းလျှင်, သင်ကသတိပြုမိကြဘူး, ဒါပေမယ့်သူကတခြားအရာအားလုံးအလုပ်စေသည်။ "
အဂ္ဂိရတ် Post ကိုအသံအကြောင်း
အဂ္ဂိရတ် Post ကိုအသံတစ် 3,500 စတုရန်းပေ, နေထိုင်သူ Foley အဆိုတော် Leslie Bloom တို့က Foley များအတွက်အထူးဒီဇိုင်းဆက်ကပ်အပ်နှံ Foley စတူဒီယိုဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီ၏သူဟာ Emmy Award ဆု-အနိုင်ရတဲ့န်ထမ်းမြောက်မြားစွာကိုအဓိကအင်္ဂါရပ်ရုပ်ရှင် long-running ရုပ်မြင်သံကြားစီးရီး, လွတ်လပ်သောရုပ်ရှင်နှင့်လူကြိုက်များဂိမ်းအဘို့အသံကဖန်တီးထားသည်။ အဂ္ဂိရတ်ရဲ့န်ဆောင်မှုကိုလည်းဂီတအသံဖမ်း, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှစွမ်းဆောင်ရည်, ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်မှု, ADR နှင့်အသံကဒီဇိုင်းပါဝင်သည်။
Aurora ကနျြးမာရေးကင်ပိန်း / ကိုလိုနီထောက်ခံ ထုတ်လွှင့်-လူမှုမီဒီယာ ထုတ်လွှင့်-SocialMedia ထုတ်လွှင့်-SocialMeida တည်းဖြတ်ခြင်း Foley ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor SJGolden - အသံက လှံ & Arrows ကိုလိုနီခေတ် ကိုလိုနီခေတ် - သတင်း ကိုလိုနီ / ချီကာဂို တီဗီနည်းပညာ 2019-09-04
ယခင်: သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်ပွဲတော်မှာ Blackmagic ဒီဇိုင်းကုန်ပစ္စည်းများအသုံးပြုဆာလောင်မွတ်သိပ်ကမ္ဘာမြေ Productions
နောက်တစ်ခု: RIST ဖိုရမ် IBC2019 မှာအခမဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ Host မှ